Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 5)
Google mandefa Read along, fampiharana izay ahafahan'ny ankizy mianatra mamaky boky miaraka amin'ity rindrambaiko maimaimpoana ity ary mialoha.
Ny mpanjifa mailaka Spark dia novaina ho 2.5 miaraka amin'ny fanovana ny famolavolana, ny fitehirizana mailaka ho PDF sy maro hafa
Fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana miharihary ho an'ny Spark toy ilay boaty fitaovana izay hainay ampanjifaina ihany koa ankehitriny.
Ekipa tokana izao no mitarika ny fandefasan-kafatra hafatra sy fifandraisana amin'i Google
Duo, Messages ary telefaona no fampiharana 3 izay hotarihan'ny ekipa Google iray ihany handeha hiaraka amin'ny tanjona iraisana.
Google Authenticator dia havaozina aorian'ny taona maro miaraka amina endrika vaovao sy fahaizana mandefa kaonty
Ny interface-ny dia nihatsara koa noho ny Material Design 2.0 ao amin'ny Google Authenticator ary zava-baovao amin'ny fampiononana rehetra eto an-tany.
Fanampiana Covid-19: Ireo fampiasa sy angona nangonin'ny fampiharana ofisialin'ny governemanta
Ny BOE dia namaritra tamin'ny antsipiriany ny fampandehanana sy angon-drakitra rehetra nangonin'ny fangatahana fanampiana COVID-19 natomboky ny governemanta.
NewPipe dia nohavaozina manome fanohanana feno ny Android TV sy maro hafa
Ankoatr'izay, azonao atao ihany koa ny mitady mozika amin'ny YouTube Music sy andian-baovao hafa izay entin'ny kinova NewPipe.
VLC dia havaozina: mba hahafahanao manandrana ny kinova vaovao
Lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny fanavaozana VLC vaovao, ary koa ny dingana manaraka hanandramana ny kinova vaovao alohan'ny olon-kafa
Angony ny angon-drakitra mpanome tolotra telo hanambatra azy ireo ary hahatonga anao hahatratra ny Clyma Weather ho fampiharana tsotra sy kanto amin'ny famolavolana.
Lazainay aminao hoe iza amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra izay hanampy anao hijery fahitalavitra maimaim-poana, na TV pay-per-view na ppv, DTT, fanatanjahantena, sarimihetsika ary maro hafa aza!
Ny fampiharana Google Messages dia nihoatra ny 1.000 tapitrisa alaina
Ny rindranasan'ny Google Messages dia nihoatra ny 1000 miliara fisintomana, fampiharana izay tsy hita ho azy eo amin'ny terminal Android
Telegram dia mahatratra 500 tapitrisa ny fisintomana amin'ny Android
Ny fangatahana ho an'ny Android Telegram, dia nihoatra ny 500 tapitrisa ny fisintomana, andro vitsivitsy taorian'ny nanambarana fa manana mpampiasa mavitrika 400 tapitrisa izy
Adikao amin'ny findainao Android ny lahatsoratra misy sary
Amin'ny alàlan'ny fitaovantsika Android dia azo atao ny mandika ny lahatsoratry ny sary, na alaina na mampiasa fakan-tsary amin'ny fotoana rehetra.
Spotify dia manana mpampiasa 130 tapitrisa mandoa
Ny sehatra fandefasana mozika soedoà dia nahatratra 130 tapitrisa mpampiasa nandoa nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020, saika avo roa heny noho ny an'ny Apple Music.
Ny Project xCloud dia hamela anao hilalao Xbox amin'ny Android
Ny Project xCloud dia hahafahanao mankafy ny console Xbox amin'ny fitaovana Android, na telefaona na takelaka.
Jereo ny fampiharana tsara indrindra hampidinana mozika maimaim-poana amin'ny 2021. Tianao ve ny mampiasa telegram handefasana mozika? Ianaro ny fomba fanaovana azy eto
Ny fampiharana Microsoft Your Phone izao dia mamela anao hifehy ny mozika amin'ny findainao amin'ny PC-nao
Filokana iray mahaliana mba hahafahanao mitantana ny mozika mandeha amin'ny findainao avy amin'ny PC misy Windows 10 avy amin'ny Findainao.
Mianara knot 144 hafa miaraka amin'ny horonan-tsary manazava ny Knots 3D
Voasokajy tsara arakaraka ny sokajy sy ny karazany, manana fatotra 144 ianao ao amin'ny 3D Knots, fampiharana premium izay mitentina XNUMX isan-jato amin'ny euro no angatahin'izy ireo.
Mitadiava fampiharana manaitra iray izay tsara lavitra noho i Netflix ary maimaimpoana tanteraka hijerena ireo sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika tsara indrindra amin'ny finday na TV
WhatsApp dia manomboka ny fametrahana antso an-tsary olona 8
Tsy te ho very coba ianao ary avelao ny Zoom hanohy hampitombo ny isan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fandefasana WhatsApp amin'ny alàlan'ny antso an-tsary ataon'ny mpandray anjara 8 androany.
PUBG, Star Wars Jedi: Fallen Order ary FIFA no sasantsasany amin'ireo lohateny izay ho tonga ao amin'ny Google Stadia
Google dia nanambara ny sasany amin'ireo lohateny izay efa misy na ho avy tsy ho ela amin'ny sehatra lalao video streaming.
Ahoana ny fampiasana ny Telegram Stickers amin'ny WhatsApp ary ny mifamadika amin'izany
lahatsoratra an-tsary izay ampidirako fampianarana video roa azo ampiharina momba ny fampiasana ny Telegram Stickers ao amin'ny WhatsApp ary ny mifamadika amin'izany, ireo an'ny WhatsApp amin'ny Telegram.
Ny fidirana izao dia mamela anao handefa rakitra eo an-toerana ary hampiasa baiko ankafizinao amin'ny tsindry havanana
Avy amin'ny beta dia efa azonao andramana ity andiana fiasa ity ho an'ny famindrana haingana kokoa ao amin'ny Join ary ny baiko kitiho ankavanana ho an'ny menio manodidina.
Nanjary loharano misokatra ny ProtonMail: ny mpanjifan'ny mailaka miaro ny fiainanao manokana
Mpanjifa mailaka natokana ho an'ny fiainana manokana antsoina hoe ProtonMail. Manana ny mpizara azy any Suisse ho iray amin'ny antsipiriany.
Facebook dia manohy ny drafitra fanaovany doka amin'ny WhatsApp
Ny mpitantana sasany dia manahy ny amin'ny vokadratsin'ny dokam-barotra amin'ny WhatsApp, hoy ny The Information.
Telegram mankalaza mpampiasa mavitrika 400 tapitrisa miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Telegram dia nanambara mpisera mavitrika marobe hatramin'ny nanombohany ny taona 2013. Miaraka amin'ny fanovana lehibe izany taorian'ny fanambarana natao.
Ny Gboard dia hamela kopia haingana sy hametaka miaraka amina fiasa vaovao
Nanampy ny safidy handika sy hametaka haingana kokoa i Gboard mandritra ny andro vitsivitsy, zavatra ilaina ho an'ireo izay nampiasa an'ity fitendry ity.
Nandefa Messenger Room ny Facebook, vahaolana vaovao ho an'ny antso an-tsary izay afaka mampifandray olona hatramin'ny 50 miaraka
Facebook dia nanangana vahaolana vaovao ho an'ny antso an-tsary, izay antsoina hoe Messenger Room. Afaka mifandray hatramin'ny olona 50 indray mandeha.
[Lahatsary] Ahoana ny fampiasana ny Telegram Stickers amin'ny WhatsApp
Hitako izay anehoako anao ny fomba fampidinana ireo sticker Telegram anao hampiasa azy ireo amin'ny WhatsApp amin'ny fomba tena tsotra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fomba hitsikilovana WhatsApp na hahafahana mampiasa kaonty WhatsApp amin'ny fitaovana roa samy hafa miaraka. Azonao atao ve ny mitsikilo WhatsApp?
Nosoratan'i San Jordi Free boky. (Maimaimpoana isaky ny Sant Jordi LLibres)
Lahatsoratra misy video izay anazavako ny fomba ahazoana boky maimaim-poana amin'ireo mpanonta fanta-daza toa an'i Anaya na Barcanova sy ny hafa amin'ny fomba malalaka tanteraka.
Izahay dia apetraka mifanatrika mivantana ireo Widget an'ny fampiharana lisitra 4 asa tsara atao indrindra
Ny widget dia zava-dehibe amin'ity karazana lisitry ny lisitry ny to-do ity satria mamela ny famitana ny lahasa amin'ny birao iray ihany amin'ny finday nefa tsy mila manokatra ny fampiharana.
Google Photos amin'ny Android dia mamela ny safidy hiditra amin'ny horonan-tsarinao
Google Photos dia mihoatra ny galeraky ny sary sy horonan-tsary fotsiny, fa manana safidy anatiny ihany koa amin'ny famoronana sarina sary sy horonan-tsary.
Ny Play Store dia manana olana amin'ny asa any amin'ny firenena sasany
Ny Play Store dia manana olana amin'ny fandidiana sasany any amin'ny firenena sasany, olana misy fiatraikany amin'ny sary aseho amin'ny fampiharana.
Vivaldi ho an'ny Android dia mivoaka amin'ny beta amin'ny maha-mpizahatany Chromium misy "tab-style desktop"
Browser Chromium misy ny fomban'ny "tabs desktop" ary izay misy fiasa marobe hampiavaka azy manokana.
[Lahatsary] Ahoana ny fomba hanamboarana ny tontolon'ny volanao amin'ny fomban'ny iOS finday, MIUI, Oxygen, EMUI, UI iray ary maro hafa
Fampiharana tsara iray hanomezana io teboka manokana io amin'ny tontonana volan'ny findaintsika ary noho izany dia apetrakao amin'ny fomba iOS, MIUI, UI iray, EMUI, Oxygen ary maro hafa.
Google Duo dia manohy mampiditra fiasa vaovao sy manatsara ireo efa misy
Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia manohy miasa manatsara ny fiasan'ny Google Duo, fampiharana izay nampitombo ny fampiasana azy nandritra ny quarantine nataon'ny coronavirus
Bot 3 ho an'ny Telegram izay ho tianao !!
Lahatsoratra video izay itondrako anao 3 Bots ho an'ny Telegram izay azoko antoka fa ho tianao, milalao zavatra mety amiko ve ianao?
Notsapainay ny Facebook Gaming, ny andrana amin'ny tambajotra sosialy manohitra an'i Twitch avy amin'ny sehatra misy azy
Ny tambajotra sosialy dia mamely mafy amin'ny Facebook Gaming amin'ny alàlan'ny fandefasana azy any Etazonia sy eto Espana. Betsaka ny zavatra azo atao amin'ny fampiharana.
Google Photos dia hamela anay hanala ny audio amin'ireo horonan-tsary
Ny fiasa manaraka izay havoakan'i Google Photos dia hahafahantsika manala haingana ny feo amin'ireo horonan-tsary ary miaraka amina paika tokana.
Facebook Gaming no fampiharana streaming lalao video vaovao natomboka ho an'ny Android
Navoaka ho an'ny Android ny fampiharana Facebook Gaming ary azo sintonina amin'ny alàlan'ny Play Store.
Bundle Notes dia fampiharana fanamarihana lehibe sy vaovao tokony ho raisina
Miaraka amin'ny mari-pahaizana, fitantanana tetikasa, lisitry ny raha-hatao, na fampahatsiahivana miraikitra, Bundle Notes dia lasa fampiharana manamarika fanamarihana mety.
Ahoana ny fomba hanakanana ireo mpanakanto tsy tianao ao amin'ny Spotify
Raha reraky ny fihainoana ity mpanakanto tianao kely ity ianao amin'ny playlist Spotify dia azonao atao ny mampanjavona azy amin'ny fanarahana ireo dingana ireo
Kiwi Browser dia loharano misokatra
Ny mpizaha Kiwi Browser dia nanjary loharano misokatra ka ny kaody dia afaka ampiasaina amin'ny tranonkala rehetra amin'ny Android.
Fehezo ary ampangataho ny hafanan'ny findainao amin'ny alàlan'ity rindranasa Android ity
Phone Cooler Pro dia rindrambaiko ahafahanao mahafantatra ny hafanan'ny processeur, ny RAM ampiasaina ary ny fihenan'ny CPU amin'ny dingana vitsivitsy.
WhatsApp dia hampiakatra ny fetran'ny mpampiasa amin'ny antso an-tsarimihetsika ho efatra mahery
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny 2.000 tapitrisa mahery ...
Netflix dia manamarina modely mifanentana amin'ny HDR10 avy amin'ny Sony, Xiaomi ary Oppo
Netflix dia nanitatra ny isan'ny fitaovana mifanaraka amin'ny serivisy horonantsary mivantana, manampy modely avy amin'ny Sony, Xiaomi ary Oppo
Ny fampiharana tsara indrindra avy amin'ny magazay F-Droid amin'ny taona 2020 (tsy misy mpanaraka)
Lisitra iray afaka manolo ireo izay ampiasaintsika rehetra amin'ny finday matetika, ary avy amin'ny F-Droid dia midika loharano misokatra ary tsy misy mpanaraka.
[Video] Afaka miantso video avy amin'ny Telegram izao ianao
Afaka manao antso an-tsary avy amin'ny Telegram ianao noho ny Vidogram, fampiharana iray somary feno izay manana safidy maro azo alamina.
Google Play mandeha miasa hiadiana amin'ny toerana misy anao sy ny famandrihana diso
Ny famandrihana sy ny toerana dia ny lafiny roa ifantohan'ny Google ny fahalianany hanatsara ny sehatra
Safidy hizara ao amin'ny Chrome amin'ny alàlan'ny kaody QR azo alaina ao Canary (ary miaraka amin'ny dinôzôro)
Ny pejin-tranonkala iray dia azo zaraina mora amin'ny alàlan'io kaody QR izay novokarina avy amin'ny Chrome io ihany; Canary amin'izao fotoana izao.
Adinoy ireo serivisy Google misy ireo safidy hafa
Asehonay aminao izay rindranasa tsara indrindra hodinihina raha te hampiato ny fampiasana serivisy Google ianao na tsy mifanaraka ny telefaoninao.
Android dia hamela anao handraisana antso an-tanindrazana
Google dia miasa amin'ny fampiasa vaovao ho an'ny rafitra fiasa. Ny tanjona? Azonao atao ny mandray an-tsoratra antso an-tariby amin'ny Android
Fanangonana horonantsary kilalao mba tsy hanelingelina anao ao an-trano sy ny rindranasa izay mety ilaina amin'ny fihazonana feno
Lahatsary fanangonana horonantsary mba tsy ho tototry ny trano sy fampiharana ilaina izay milainao mandritra ny fitanana.
Ahoana ny fomba handefasana ny fampandrenesana rehetra momba ny hafatra, antso ary fanairana amin'ny finday iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny alàlan'ny SMS na mailaka
Message Forwarder no fampiharana ahafahantsika manana io asa lehibe io handefasana fampandrenesana amin'ny isa iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny alàlan'ny SMS na mailaka.
Ahoana ny fomba hizarana tantara amin'ny Facebook avy amin'ny Instagram
Azavainay ny fomba ahafahanao mizara ny tantaranao Instagram ao amin'ny kaonty Facebook-nao avy amin'ny fampiharana iray ihany. Tsotra sy haingana ny fanaovana azy.
Ny mombamomba ny virtoaly tsara indrindra ho an'ny antso an-tsarinao amin'ny Zoom
Ho an'ireo antso an-tsarinao amin'ny Zoom dia mizara ny fiaviana virtoaly tsara indrindra izahay mba hamelomana ireo fifandraisana nomerika ireo amin'ireo mpiara-miasa sy fianakaviana.
Ny Libretorrent dia nohavaozina ho 2.0 miaraka amin'ireo fiasa vaovao maro: fanohanana ny fitehirizana ivelany, Material Design 2.0 sy maro hafa
Ny kinova 2.0 an'ny libretorret dia miaraka aminy Material Design 2.0 sy andiana fiasa vaovao toy ny fanohanana ny fitehirizana ivelany.
Ahoana ny fomba fandefasana sy fanokafana mailaka miafina amin'ny Gmail
Ny fampiasana mailaka tsiambaratelo izay mamela antsika hampiasa Gmail amin'ny fomba natiora, dia fomba iray tena tsara hiarovana ny vaovao alefantsika amin'ny Internet
TikTok dia nihoatra ny 1.000 miliara fisintomana atosiky ny coronavirus
Natosiky ny coronavirus, ny fampiharana horonantsary fohy dia nihoatra ny 1.000 miliara fisintahana manerantany.
Ny rindranasa finday Google izao dia misy ho an'ny smartphone tsy Pixel
Ny rindranasa Google Phone dia mihoatra ny rindranasa hiantsoana, fampiharana izay efa misy ho an'ny finday avo lenta avy amin'ireo mpanamboatra hafa
Bot botsika ilaina amin'ny Telegram: misintona mozika, andian-tsary, sarimihetsika, fampiharana ary maro hafa
Bots ilaina ho an'ny Telegram amin'ny 2021 izay ahafahanao misintona mozika, sarimihetsika, andian-tsarimihetsika, fampiharana, programa PC ary maro hafa.
Ahoana ny fandefasana hafatra Instagram amin'ny solosaina
Raha te hahafantatra ny fomba handefasanay hafatra amin'ny alàlan'ny Instagram ianao dia manasa anao hanohy hamaky ity lahatsoratra ity.
Google dia mandefa klavier braille ho an'ny Android
Google dia nanangana ny TalkBack, ny kitendry braille virtoaly vaovao izay ho lasa safidy hafa ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana.
Ahoana ny fomba hanokafana sy hanovana ireo rakitra HEIC amin'ny Android
Ny endrika HEIC mahomby be dia tsy azo zahana amin'ny Android, na izany aza, miaraka amin'ity rindrambaiko ity dia afaka manokatra rakitra amin'izany endrika izany isika
Ahoana ny fametrahana Netflix amin'ny fitaovana tsy misy mpanohana
Fampianarana iray isaky ny dingana izay asehoko anao ny fomba fampidinana sy fametrahana Netflix amin'ny fitaovana tsy tohanana. Mety ho an'ny finday finday, Takelaka sy boaty fahitalavitra ary maro hafa!
Disney + dia mahatratra famandrihana 50 tapitrisa
Marina tokoa fa ny premiere an'ny Disney + dia niteraka fanantenana maro tany Eropa. Ny habetsahana sy ny kalita ...
Ahoana ny fanaovana sonia nomerika rakitra PDF amin'ny findainao amin'ny Acrobat Reader ho an'ny ERTEs, moratorium ary maro hafa
Ny moratorium na ny fanamarinana ny fanaovan-tsonia antontan-taratasy dia ohatra sasantsasany amin'ny fanaovana sonia nomerika avy amin'ny Acrobat Reader, ilay fampiharana Adobe.
Netflix dia manolotra fifehezana ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny fianakaviana, mampianatra anao ny fampiasana azy izahay
Netflix dia nanapa-kevitra ny hamoaka fanavaozana ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny ho an'ny fianakaviana. Ampianarina anao hampiasa azy io tanteraka izahay anio.
Google mandrara ny mpiasany tsy hametraka ny rindranasa antso an-tsary Zoom amin'ny solosaina miasa
Hatramin'ny nanjary areti-mifindra manerantany ny coronavirus, nanjary ...
WhatsApp dia mametra ny fandefasana hafatra amin'ny mpandray tokana
WhatsApp dia nanomboka nanena ny isan'ny fampitana hafatra azontsika atao amin'ny fampiharana azy io.
Facebook dia manampy ny bara miaraka amin'ireo takelaka manan-danja indrindra eo ambany
Ny rindrambaiko finday amin'ny tambajotra sosialy dia mahazo fanovana vaovao hahafahana mandray amin'ny Facebook amin'ny tanana iray ary amin'ny fomba ahazoana mahazo aina kokoa.
Efa manana fangatahana izahay hifehezana ny COVID-19 «Coronavirus», inona no andrasanao hampidinana azy?
Ny Governemanta Espaniôla dia nandefa ny fangatahana fanampiana COVID-19, fitaovana iray hanombanana ireo soritr'aretina voalohany amin'ity valanaretina ity.
Netflix dia manohana an'i Bixby, mpanampy an'i Samsung
Netflix no mpitarika amin'ny fandefasana serivisy horonantsary, sehatra izay vao haingana…
Google Maps dia manamora ny fandefasana sakafo amin'ny Internet izao satria mody daholo isika, saingy misy zavatra tsy dia ilaina loatra
Afaka manafatra sakafo amin'ny Internet ianao na maka amin'ny Google Maps miaraka amin'ireo marika roa vaovao, fa tsy amin'ny fivarotana lehibe mandritra ny androm-piainany.
Ahoana ny fomba famakiana gazety an-tserasera, ireo gazety tianao indrindra avy amin'ny toerana iray !!
Fampiharana hamakiana ireo gazety an-tserasera amin'ny fomba tsotra sy tsotra ary tsy misy afa-tsy ireo izay mahaliana antsika amin'ilay tranonkala azo ovaina ihany.
Ny beta vaovao an'ny Samsung Internet, dia manampy fanatsarana hisorohana ny fanarahan-dia
Ny beta vaovao an'ny Samsung Internet, misy beta vaovao iray ankehitriny izay misy ny fanatsarana ny fanarahana ary koa ny fanisy bokotra fitetezana vaovao.
Ny rindranasa Google Phone dia hanampy fihetsika miaraka amin'ny finday avo lenta hampanginana azy
Ny rindranasa Google Phone dia hahazo fampiasa vaovao amin'ny fanavaozana manaraka izay ahafahanao mangina ny antso amin'ny alàlan'ny famadihana ny finday avo lenta
Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tsary amin'ireo vondrona WhatsApp. Tutorial-Video amin'ny dingana tsikelikely
Tutorial video azo ampiharina izay anehoako azy ireo ny fomba hanaovana antso an-tsary miaraka amin'ny olona efatra mampiasa ny fampiharana WhatsApp ofisialy.
Amazon dia mamorona serivisy famandrihana ho an'ny lalao rahona hiatrehana ny Stadia an'i Google. Hantsoina hoe Project Tempo izy io.
Andramo maimaim-poana mandritra ny iray volana ny Amazon Prime Video
Amazon Prime Video dia manolotra serivisy maimaim-poana mandritra ny iray volana miaraka amin'ny fisoratana anarana mora. Azonao atao ny mankafy ny atiny rehetra, ny sarimihetsika, ny andiany ...
Ny zoomom dia tsy hanampy fiasa vaovao mandritra ny 90 andro raha manamboatra olan'ny tsiambaratelo
Tsy misy fampisehoana iray na iray aza ho tafiditra ao anatin'ny vahaolana lamaody ho an'ny antso an-tsary izay fantatsika avy amin'ny Zoom. Tahaka ny nambaran'izy ireo.
Olona 3.000 tapitrisa no voafatotra ao an-tranony ary miaraka amin'izay dia foana ny arabe. Jereo izy ireo amin'ny findainao miaraka amin'ireo fampiharana 3 ireo.
[Lahatsary] Izay rehetra atolotry ny kinova Telegram 6.0.1 vaovao ho antsika: Tonga ihany ny lahatahiry !!
Telegram dia namoaka ny iray amin'ireo kinova miaraka amina fanovana bebe kokoa, kinova izay misy folder na tab, statistika ary maro hafa ihany amin'ny farany.
Ahoana ny fomba hanakanana (sy hanakanana) ny olona ao amin'ny WhatsApp
Raha reraka ianao mandray hafatra WhatsApp avy amin'ny isa marobe izay tsy fantatrao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manakana ny isa.
YouTube dia manomana Shorts hifaninana amin'ny TikTok
Shorts no safidy ampiasain'ny Google, amin'ny alàlan'ny YouTube, hijoroana amin'ny fahombiazan'ny TikTok tsy mitovy
Ahoana ny fanovana ny fampandrenesana LED ao amin'ny EMUI 10
Asehonay anao ny dingana rehetra tokony harahinao hahafahanao manova ny jiro fampandrenesana amin'ny telefaona Huawei anao miaraka amin'ny EMUI 10. Tena mora izany!
Tonga ao amin'ny Harley Davidson vaovao ny Android Auto
Harley-Davidson no mpanamboatra moto voalohany nanambara ny fifanarahan'ny Android Auto amin'ny maodelin'ny ...
Raha te hankafy fampisehoana mozika angano ianao, Stingray Qello no serivisy tsara indrindra anananao amin'ny findainao maimaim-poana sy maimaim-poana.
Fampiharana hamoronana backup feno amin'ny findainao Android
Ny fanaovana backup dia zava-dehibe mba tsy hahavery data eo amin'ny telefaoninao, araho ny dingana ataontsika avy eo amin'ny terminal na amin'ireo fampiharana ireo.
Huawei dia te-hanolotra fampiharana Google ao amin'ny App Gallery
Huawei dia mikasa ny hangataka an'i Huawei hampiditra ny fampiharana ao amin'ny App Gallery mba hahafahan'ny mpampiasa misafidy ny hanohy hampiasa ny serivisy ao aminy.
Sokafy Coronavirus: Mikaroka ny fampiharana voalohany miady amin'ny COVID-19
Open Coronavirus dia tetikasa iray izay efa manana kaody loharano hamoahana ho fampiharana hiadiana amin'ny COVID-19
Ahoana ny famindrana ny famandrihana YouTube any NewPipe
Azonao atao ny mamindra fotsiny ny famandrihana rehetra anananao ao amin'ny kaontinao YouTube mankany NewPipe ary tsy mampiasa kaonty hafa.
Opera dia manambara kinova vaovao ho an'ny Android izay manatsara ny fizahana rehefa feno ny tambajotra
Opera Software dia namoaka kinova vaovao an'ny mpitety tranonkala malaza ho an'ny sehatra Android misy fanovana maro sy fiasa vaovao.
Telegram dia havaozina amin'ny 6.0 miaraka amin'ny lahatahiry chat, arisiva, statistikan'ny fantsona ary maro hafa
Fanavaozana vaovao ny fampiharana fifampiresahana Telegram izay misy fampiasa maro toy ny dice, statistika na Folders Chat.
NewPipe dia mpanjifa YouTube tena tsara fa tsy mila kaonty, misintona horonantsary ary milalao ao aoriana
Famerenana amin'ny laoniny, fampidinana video, famandrihana eo an-toerana ary famoronana playlist miaraka amin'ny NewPipe for Android.
Google dia manala ny rindranasa Infowars amin'ny Play Store hiadiana amin'ny fampahalalana diso
Ny rindranasa Infowars, avy amin'i Alex Jones, izay nampiady hevitra, dia nesorina tsy ho ao amin'ny Google Play Store, hany fivarotana nomerika mbola misy azy io.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo amin'ny findainao Huawei
Mampianatra anao ny fomba fandraisam-peo amin'ny finday Huawei haingana sy mora izahay. Tonga tanindrazana ao amin'ny EMUI 9! Ahoana raha manana EMUI 10 aho? Vahanay izany
Google Duo dia mampitombo ny fiantsoana vondrona ho 12 mpandray anjara amin'ny fotoana mety indrindra
Google Duo dia mampitombo ny fiantsoana horonantsary ho an'ny mpandray anjara 12 amin'ny fotoana mety indrindra sy amin'ny ...
Ahoana ny famerana ny mpampiasa amin'ny Instagram
Asehonay anao ny dingana manaraka haneriterena ny mpampiasa Instagram. Mbola afaka mahita ny atiny ihany izy ireo, saingy amin'ny fomba voafetra kokoa.
Ny lisitry ny fampiharana azo vakina amin'ny findainao amin'ity quarantine coronavirus ity
eReaders, sehatra, boky maimaim-poana, tantara an-tsary, magazine ary andian-safidy hafa hamakiana avy amin'ny findainao noho ny quarantine coronavirus.
Torolàlana Android ho an'ny Disney +, izany no fiasan'ny sehatra vaovao
Efa manana Disney + izahay amin'ireo sehatra misy any Espana. Ny fampiasa azy dia mitovy amin'ny an'ny sisa amin'ny Apps. Eto no hanazavana ny zava-drehetra
Ahoana ny fomba hanehoana tononkira hira ao amin'ny YouTube Music
Ny mankafy ny tononkiran'ireo hira tianay dia dingana iray tena tsotra amin'ny alàlan'ny YouTube Music
Ahoana ny fomba famakiana hafatra WhatsApp raha tsy manokatra resaka
Manazava ny fomba famakiana hafatra voaray amin'ny WhatsApp izahay fa tsy mila manokatra resaka ary miseho amin'ny Internet miaraka amina widget tsotra.
Najanon'i Google ny fivoaran'ny Chrome sy Chrome OS noho ny coronavirus
Google dia nanambara fa mampiato vetivety ny fivoaran'ny Chrome sy Chrome OS izy ireo noho ny virus coronavirus
Ahoana ny fomba hamafana ireo fitaovana amin'ny Disney +
Raha vantany vao nanomboka ny diany tany Espana ny Disney + dia maro aminareo izay mizara kaonty no manontany tena hoe ahoana no ahafahana mamafa ireo fitaovana mifandraika amin'ilay kaonty iray ihany.
Disney + dia efa misy any Espana sy firenena eropeana hafa
Ny katalaogin'i Disney dia misy ny Star Wars, Pixar, Disney, Marvel ary National Geographic ary izay atiny vaovao vaovao hankafizany amin'ny maha-fianakaviana.
Amazon Prime Video ho an'ny Android dia manomboka manampy ny mombamomba ny mpampiasa
Amazon Prime Video dia nanomboka nanolotra ny fahafaha-mamorona profil amin'ny alàlan'ny fampiharana Android
Ahoana ny fampifanarahana ny naoty vita amin'ny S Pen amin'ny fotoana tena izy eo anelanelan'ny Galaxy Note10 + sy ny PC
Samsung Notes dia tsy manome ny traikefa mitovy amin'ny tena izy amin'ny OneNote rehefa manoratra naoty avy amin'ny Galaxy Note10 + izahay ary miseho amin'ny fotoana tena izy.
Ny rindranasa misintona indrindra avy amin'ny Play Store hatramin'ny nanombohan'ny quarantine coronavirus
Betsaka ny rindranasa avy amin'ny Play Store izay navoaka tao amin'ity quarantine ity an'ny Coronavirus, izay miavaka ny app My DGT.
Ny toerana tsara indrindra ahazoana boky maimaim-poana
Manohy ny tolo-kevitra momba ny fialamboly izahay. Efa eo afovoan'ny andro quarantine napetraky ny ...
Fantaro ny pejy tsara indrindra ahafahana manova PDF, mandehana amin'ny endrika rehetra mankany amin'ity endrika ity, miaro, tsy arovana ary safidy maro hafa.
Ny rindranasa tsara indrindra hianarana fiteny amin'izao andron'ny quarantine izao ka araraoty ny fotoana
Quarantine ho an'ny coronavirus? Aza mieritreritra izany akory ary manararaotra fotoana! Fampiharana hianarana fiteny maimaim-poana amin'ny findainao.
Ny TANINDRAZANA dia manome ny dikanteny vita pirinty amin'ny PDF ho an'ny rehetra maimaim-poana
Mandritra ny ambaratonga fampandrenesana ao Espana, ny gazety El PAÍS dia manome ny dika an-tsoratra amin'ny endrika nomerika ho an'ny rehetra maimaim-poana.
Fampiharana 4 hamerenana ireo rakitra voafafa (anatiny sy SD) amin'ny Android
Raha very sary na rakitra ao amin'ny fitaovanao Android ianao dia manolotra fampiharana maromaro izahay hamerenana azy ireo anio.
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra ara-tsaina sy ara-panahy ary alao amin'ny fomba hafa ny quarantine
Ny quarantine coronavirus dia afaka manampy antsika hianatra fampiharana hampiala sasatra sy hitadidy an-trano ary hiala sasatra amin'izay.
Github dia efa azon'ny rehetra aorian'ny fivoahana ny beta
Izay rehetra azo atao amin'ny kinova desktop an'ny Github dia azo atao avy amin'ny kinova finday izao. Raha manisy kaody ianao dia ilaina izany.
Ahoana ny fomba handoavana an'io quarantine io nefa tsy ho fatin'ny fahasosorana ary hahazo tombony amin'izany aza (Post Compilation)
Lahatsoratra izay anaovako lahatsoratra iray izay hanazavanay ny fomba hampitana an'io quarantine io nefa tsy ho fatin'ny fahasosorana.
Raha mitady rindrambaiko ianao hanao antso an-tsary avy amin'ny finday avo lenta na solosainao, dia hasehonay anao ny safidy tsara indrindra azo atao eny an-tsena.
Fampiharana hitoerana amin'ny endrika tsy handao ny trano mandritra ny quarantine
Manolotra lisitr'ireo fampiharana kely izahay hanohizan'ny fanatanjahan-tena ao an-trano mandritra ireo andro nigadrana noho ny Coronavirus
Ny rindranasa tsara indrindra hijerena fahitalavitra maimaimpoana handoavana ny quarantine nefa tsy hatahotahotra
Ho an'ny quarantine dia nanangona ny fampiharana tsara indrindra hijerena maimaimpoana amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny fitaovanay izahay, na finday izany na takelaka.
Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tsary miaraka amin'i Zoom ho mpampiantrano na hidirana ho mpandray anjara
Ampianarinay ianao hanomboka ny kaonferansa ho mpampiantrano na handray anjara amin'ny maha mpijery anao amin'ny Zoom, ny fampiharana lamaody ho an'ny fivorian'ny asa, ny fianarana ...
Ny fampiharana fanabeazana tsara indrindra hojerena ao an-trano mandritra ny quarantine
Izahay dia manome anao compilation kely an'ny Apps fanabeazana handinihana ao an-trano mandritra ny andro fihazonana ao an-trano noho ny Coronavirus
Antivirus maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android
Betsaka ny Antivirus azo hitazomana ny rafitra Android ho voaro amin'ny fandrahonana amin'ny fampiharana, ny fivezivezena, ankoatry ny zavatra hafa.
Facebook mba hanesorana ny rindranasa MSQRD amin'ny sivana tena izy
Ny fampiharana sivana zava-misy nohamafisina MSQRD dia tsy ho hita intsony amin'ny 13 aprily.
Miadana ve ny findainao? Fomba fanamboarana azy
Asehonay anao ny dingana tokony harahina hamahana ireo olana mety hitranga amin'ny findainao aorian'ny fampiasana maharitra.
Ahoana ny fanesorana bloatware amin'ny telefaona Xiaomi anao
Lazainay aminao ny dingana manaraka hanary ny bloatware rehetra amin'ny telefaona Xiaomi anao, mba hanananao ny terminal tsy misy rindranasa tsy misy fako. Mora loatra!
Misy safidy maro izay ananan'ny Android amin'ny alàlan'ny default, maro amin'izy ireo no ilaina raha ampiasaintsika ho tombontsoantsika manokana izany.
Azonao atao ny mamadika ny findainao ho seismograph
Atorinay anao ny fomba hamadihana ny findainao na ny takelakao ho seismograph mahery, afaka mamantatra karazana horohoron-tany rehetra amin'ny tany.
Ny mpanamboatra finday avo lenta sy ny fahitalavitra dia tsy afaka mijanona tsy mampiasa Android TV, raha tsy izany dia very ny fidirana amin'ny Play Store
Ireo mpandahateny tsara indrindra omena amin'ny Fetin'ny ray
Manangona ireo mpandahateny mahay indrindra azonao amin'ny Amazon ao anaty lisitra izahay mba hahafahanao misafidy izay homena amin'ny Fetin'ny Ray.
Ahoana ny fomba fitetezana YouTube amin'ny alàlan'ny mode incognito ary tsy mamela soritry ny fikarohana nataonao
Azavainay, amin'ny fomba mora sy tsotra, ny fomba ahafahanao mivezivezy amin'ny YouTube ho an'ny Android amin'ny alàlan'ny mode incognito izay alefa amin'ity lesona tsotra ity.
Ahoana ny fanovana ny sary momba ny mombamomba ny Spotify
Atorinay anao ny fomba fanovana ny sary momba ny kaontinay Spotify amin'ny alàlan'ny fampiharana Android
Lahatsoratra navoakako izay nampitandremako anao momba ny fisalasalana mampiahiahy izay mety hiteraka fitaka, famitahana izay handaniam-bolantsika ary handiso fanantenana antsika
Ny fampiharana finday tsara indrindra azonao amin'ny findainao
Mialà sasatra, ampitao ary tanteraho avy any an-trano ny asanao amin'ny alàlan'ny fampiharana finday tsara indrindra azonao omena amin'ny findainao sy amin'ny solosainao.
Bot 3 ho an'ny Telegram izay hanampy anao hisintona horonan-tsary sy sary avy amin'ny Instagram, Twitter, sy maro hafa
Amin'ity indray mitoraka ity aho dia hanolotra, manoro hevitra anao ary mampianatra anao ny fomba fampiasana Bot 3 ho an'ny Telegram izay azoko antoka fa ho tianao.
Vondron-dahatsary an-tserasera malaza mandefa Vimeo Create to Android
Ny sehatra streaming malaza dia mandefa ity app ity hiditra amin'ny horonan-tsary sy audio miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hamorona atiny miaraka amin'ny Vimeo Create
Spotify dia manolotra an'i Radar Spain, fandaharana ho an'ireo mpanakanto vao misondrotra
Mpanakanto 10 no efa tafiditra ao amin'ny programa Radar Spain izay tian'i Spotify ampahafantarina mpanakanto Espaniola manan-talenta lehibe.
Miaraka amin'ny fampiharana famantaranandro Galaxy S20 dia afaka mametraka fanairana amin'ny Spotify ianao
Safidio ny lohahevitra tianao indrindra hanaitra anao isan'andro amin'ny Galaxy S20 vaovao anao ary azo alaina avy amin'ny fampiharana amin'ny famantaranandro.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny tontonana fampandrenesana sy ny fikirana haingana amin'ny Android
One Shade dia ahafahantsika manova ny lafiny rehetra amin'ny takelaka fampandrenesana Android hanamboarana azy araka izay tadiavintsika.
Mijanona tsy mampiseho valin'ny fikarohana momba ny teny "coronavirus" ny Play Store
Google dia manao izay vitany hiadiana amin'ny fampahalalana diso ary nanala ny valin'ny fikarohana tao amin'ny Play Store ho an'ny coronavirus
Sintomy ny Xiaomi Mi Browser, mpizaha tranonkala miaraka amin'ireo fiasa tianao
Xiaomi Mi Browser, mpizaha tranonkala hafa izay misy fampiasa tsy manam-paharoa izay hahagaga anao, azo alaina amin'ny Android rehetra izao.
Ny app Facebook dia mandefa menio manga be miaraka amin'ny fanovana ny endrika
Ny fahitana azy tena tsara dia mazava kokoa amin'ny Facebook izay nametraka ny bateria hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa ny fampiharana ao amin'ny Android.
Inona no atao hoe Hangouts Meet: omen'ny Google maimaim-poana amin'ny orinasa sy ny sekoly noho ny coronavirus
Raha tsy fantatrao ny atao hoe Hangouts Meet, angamba fotoana tokony anoloran'i Google maimaim-poana izany ho an'ireo orinasa sy sekoly manerantany.
Fampiharana telo hanafahana ny fahatsiarovana RAM amin'ny Android
Raha mila manafaka RAM ianao dia azonao atao amin'ireto fampiharana telo tena ilaina ireto ho an'ny fitaovanao Android.
[APK] Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina WhatsApp: azo ofisialy izao
Rehefa avy niandry ela dia efa eo ny fanavaozana ny kinova farany an'ny WhatsApp ary io maody maizina io. Mila fotoana ny fametrahana avy amin'ny Google Play.
Sariho ny fanalahidin'ny volavola araka izay tadiavinao amin'ny fampiharana Power Volume Volume Key vaovao
Ampandehano ny Bluetooth, atombohy ny fandraisam-peo sy ny lahasa hafa ahafahanao manamboatra ity app ity antsoina hoe Volume Volume Keys.
Cortana dia hanary ny Android manontolo amin'ny volana aprily
Amin'ny volana aprily 2020, Cortana, mpanampy an'i Microsoft, dia tsy ho hita intsony na amin'ny endrika fampiharana na amin'ny alàlan'ny Microsoft launcher
Ny Play Store dia manampy ny safidy ahafahana mampandeha maody maizina
Manampy ny Google hamela ny mpampiasa hisafidy karazana maody asehon'ny fampiharana Play Store: fotsy, maizina na miankina amin'ny rafitra.
Creator Studio no fampiharana Facebook vaovao handinihana ireo horonantsary ampidininao ao amin'ny pejinao
Mazava, miaraka amina endrika kanto sy fampisehoana mahafinaritra, izany no Creator Studio, ilay fampiharana Facebook vaovao natokana ho an'ny horonan-tsary sy famoahana amin'ny pejy.
Ny serivisy fitaterana mozika dia miteraka fidiram-bola bebe kokoa ho an'ireo orinasa firaketana noho ny varotra nomerika sy ara-batana
Ny serivisy fitaterana mozika dia nanjary loharanom-bola lehibe ho an'ireo orinasan-tsoratra
Google dia manala ireo fampiharana rehetra izay manara-maso tranga coronavirus amin'ny Play Store
Google dia nanaisotra ny fampiharana rehetra izay manara-maso tranga amin'ny sari-tany coronavirus ary nipoitra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny fivarotana fampiharana an'i Huawei dia ampiasain'ny mpampiasa maherin'ny 400 tapitrisa isam-bolana ary nanjary fivarotana fampiharana faha-3 be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao
Raha toa ka tsy miseho ilay hafatra manasa anao hanafoana ny fako na ny fisie dia tokony ho fantatrao fa tsy irery ianao, bibikely Gmail izany ary misy ny vahaolana.
Manana telefaona Huawei tsy misy EMUI 10 ve ianao? Asehonay aminao ny fomba hampiasana ny maody maizina amin'ity kinovan'ny rafitra fiasa goavambe Shinoa ity.
Ny fivoriana dia tonga safidy tsara amin'ny WhatsApp, azo antoka 100%
Ny fivoriana dia tonga ho fampiharana azo antoka, tsy mampiasa metadata, tsy mila kaonty mailaka na nomeraon-telefaona.
OneDrive dia manomboka maody maizina amin'ny beta farany
Ao anatin'ireo serivisy fitahirizana rahona, manana safidy hafa isan-karazany azonay ampiasaina izahay, ny Google malaza indrindra ...
Google dia mamafa ny rindranasa maherin'ny 600 amin'ny Play Store noho ny fampisehoana doka tsy mety
Ny doka tsy mendrika asehoan'ny fampiharana sasany dia nanjary laharam-pahamehana ho an'i Google, ary nanomboka nanala azy ireo.
Hofeperan'i Google ny fidirana amin'ny rindranasa mankany amin'ilay toerana
Hanomboka hamakafaka ny fampiasana ny toerana nofaritan'ny fampiharana Play Store i Google mandritra ny fizotran'izy ireo.
Ahoana ny fanaraha-maso ny toetoetran'ny findainao rehefa milalao ianao
Araho maso ny toe-piainan'ny findainao amin'ny alàlan'ity fampiharana Thermal Monitor ity izay ahafahanao mahafantatra ny mari-pana ilaina rehefa milalao miaraka aminy ianao.
Sintomy ary apetaho ny Widget Motorola Command Center manaitra amin'ny Android rehetra
Eto aho dia mamela ny Widget Motorola Command Center manaitra sy mahavariana hapetraka amin'ny maodelin'ny terminal Android.
Tsy milavo lefona i Microsoft: manomana ny fanombohana ny fisoratana anarana amin'ny Android
Ny goavambe monina ao Redmond dia nanamafy fa ny Microsoft Defender dia ho sintonina ary hapetraka ao amin'ny Android afaka fotoana fohy.
Ahoana ny fomba ahazoana ny beta farany amin'ny fampiharana tianao indrindra alohan'ny olon-kafa miaraka amin'ny Beta Maniac
Miaraka amin'ny fampandrenesana dia hahazo fanasana amin'ny beta mihidy amin'ny lalao miaraka amin'ity rindrambaiko maimaim-poana antsoina hoe Beta Maniac ity ianao ary tianay.
Shade Launcher dia ny fitohizan'ny Rootless Pixel Launcher hatramin'ny herintaona lasa izay
Raha mitady launcher maimaimpoana ianao miaraka amina fikitihana manokana amin'ny zavatra niainana Pixel Launcher, ity dia Shade Launcher ary efa anananao ao amin'ny Play Store.
Google AutoFlip hamoaka horonantsary ho azy ary mampakatra azy ireo amin'ny Instagram sy ny hafa
Avy amin'i Google ity fitaovana ity hanapahana horonantsary marindrano ary hampakaranao azy ireo amin'ireo tambajotra izay tia horonantsary mitsangana.
Ny Office all-in-one Office vaovao dia efa hita ao amin'ny Play Store
Office, ilay rindranasa izay misy ny rindranasa Office rehetra, dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny ho maimaim-poana tanteraka.
Chrome dia hamela anao hisafidy ny fitehirizana tenimiafina eo an-toerana na ny fampandrindranao azy ireo amin'ny kaontinao
Endri-javatra manan-danja ho an'ny teny miafina avy amin'ny mpitety Chrome izay ahafahantsika misafidy ny toerana hanafenana iray eo an-toerana.
Ny iray amin'ireo mpiara-manorina ny WhatsApp dia manangona vola mitentina 50 tapitrisa dolara amin'ny Signal hitondrana azy amin'ny ambaratonga manaraka
Mandehana avy amin'ny mpamorona 3 ka hatramin'ny 20 ao amin'ny ekipa noho ny fampiasam-bola notontosain'ny iray amin'ireo mpiara-namorona ny WhatsApp in Signal.
Android 11 eo akaiky eo fotsiny? Tsy nahy namoaka ny OS Preview i Google
Android 11 Developer Preview dia tafaporitsaka tsy nahy tao amin'ny tranokala ofisialin'ny Google, ilay orinasa Mountain View.
WhatsApp dia mahatratra 2.000 tapitrisa mpampiasa mavitrika
Raha ny angom-baovao ofisialy farany navoakan'ny orinasan'i Mark Zuckerberg, WhatsApp dia manana mpampiasa 2.000 miliara.
Notsapainay i Byte, tambajotra sosialy vaovao misy sary mihetsika mini-kely avy amin'ilay mpamorona an'i Vine hifaninana amin'i Tik Tok
Avy amin'ilay namorona ny Vine no nivoahan'ity sehatra vaovao ity izay toa tsara ary mikendry ny hanala ireo mpampiasa avy amin'ny Tik Tok miaraka amin'ireo horonantsary kely misy azy.
Weird Cuts no rindrambaiko fampiroboroboana zava-misy farany mahatsiravina azonao jerena
Amin'ireo fihetsika ireo dia hofongaranao ny zava-misy hametahana azy amin'ny sary izay manome atiny hafa noho izay hitanao. Ity dia «Weird Cuts».
Araraoty ny findainao taloha: avadiho ho fakantsary fanaraha-maso
Noho ny fandrosoan'ny teknolojia dia afaka mampiasa mihoatra ny iray ny findaintsika isika izao. Na dia…
Google dia manala ny rindranasa Wiseplay amin'ny Play Store
Nanapa-kevitra ny hanaisotra ny fampiharana Wise amin'ny Play Store i Google, mpilalao malaza iray izay tena mahay zavatra sy heverina ho "mampidi-doza".
YouTube Music dia hamela antsika hitahiry ny fitehirizam-bokintsika
Ny tranomboky mozika ananan'ny mpampiasa ao amin'ny Play Music amin'izao fotoana izao, dia azo afindra ho azy ao amin'ny YouTube Music
Manomboka tonga amin'ny Google Translate ny maody maizina
Ny maody maizimaizina dia nanomboka hita ao amin'ny Google Translate, avy amin'ny kinova 6.5 fa tsy amin'ny mpampiasa rehetra, fa tsy mampiseho ny ho fanaovany izany intsony.
Tsy ho ela dia hosakanan'ny Google Chrome ny fisintomana tsy azo antoka eo ambanin'ny pejy HTTPS
Mandroso tsimoramora, hasiana sakana amin'ny fampidinana atiny mifangaro avy amin'ireo tranokala izay mivezivezy avy any Chrome tsy misy HTTPS.
Mahatratra 125 tapitrisa ny isan'ny mpanjifa Spotify
Tamin'ny 31 Desambra, ny isan'ny mpanjifa karama amin'ny Spotify dia niisa 125 tapitrisa, tarehimarika izay mametraka azy ambony lavitra noho ny sisa amin'ireo serivisy mozika mivantana.
Ahoana ny fanitsiana mandeha ho azy ny haavon'ny feo amin'ny findainao Android nefa tsy manao na inona na inona
Amin'ny rindranasa maimaimpoana dia hampianarinay anao ny fomba fanitsiana mandeha ho azy ny haavon'ny feo amin'ny findainao Android. Safidy malalaka.
Avereno amin'ny alàlan'ny EaseUS MobiSaver ireo rakitra voafafao
Ny fahazoana rakitra voafafa ao amin'ny fitaovantsika Android dia tsy mora velively noho ny fampiharana EaseUS MobiSaver
Ahoana no hahafantaranao hoe hafiriana ianao no nifandray tamin'ny findainao tamin'ny fotoana tena izy
Digital Wellbeing dia noraisin'i Google tamim-pahamatorana tamin'ity fampiharana vaovao antsoina hoe Screen Stopwatch ity, izay ao anatin'ny andiana fampiharana.
Google dia mandray ny tolo-kevitra kanto an'ny lehilahy miaraka amin'ny sarety miaraka amin'ireo finday 99 ao amin'ny Maps
Mobiles 99 ao anaty sarety hamoronana fitohanan'ny fifamoivoizana ao amin'ny Google Maps no hevitra naroson'ny mpanakanto alemanina iray izay nahasarika ny sain'i Google.
Mpanakanto iray mitondra mobiles 99 ao anaty fiara iray hamoronana fitohanan'ny fifamoivoizana tsy misy ao amin'ny Google Maps
Ny fitohanan'ny fifamoivoizana tsy misy noho ny fiara miaraka amin'ireo finday miisa 99 ary mamitaka tanteraka ny Google Maps hanome filazana tsy marina.
Ny fanavaozana ny Samsung Good Lock 2020 miaraka amin'ny fanohanan'ny Android 10 sy One UI 2.0 dia efa misy izao
Azo alaina ho an'ny Android 10 sy One UI 2.0, Samsung Good Lock koa tonga miaraka amina vaovao ho an'izay rindrambaiko ho an'ny Galaxy.
Mariho ny fampiasana isan'andro omenao ny findainao miaraka amin'ny Action Bubble avy amin'i Google
Alao sary an-tsaina isan'andro ny fampiasana omenao ny findainao miaraka amin'ity fampiharana Google antsoina hoe Activity Bubble ity ary ao anatin'ny andrana iray.
Azontsika atao izao ny mampangina ny fampandrenesana ao amin'ny Android Auto
Android Auto dia navaozina tamin'ny kinova vaovao izay manolotra antsika ho zava-baovao indrindra amin'ny mety hampanginana ireo fampandrenesana
Google Translate dia hanampy ny maody «mandika»
Nanjary lasa matanjaka kokoa ny fandikan-teny Google noho ny fomba fandikana vaovao izay manolotra fandikan-teny ho lahatsoratra izay henontsika amin'ny fotoana tena izy
Ahoana ny fomba handraisana ireo vaovao farany sy fampandrenesana fametrahana ho an'ny fampiharana sy lalao avy amin'ny Google Play indray
Google dia nanala ny fampandrenesana ny fametrahana fampiharana sy lalao amin'ny findainay tato ho ato. Ampianarinay anao ny fomba hamerenana ity fampiasa ity.
Tonga i Byte ho mpandimby an'i Vine, azo alaina amin'ny Android ankehitriny
Tonga i Byte ho mpandimby ny fampiharana Vine malaza. Ny fampiharana dia hamela anao mampakatra horonan-tsary fohy segondra maromaro.
Nahatratra 55 tapitrisa ireo mpampiasa Amazon Music
Spotify no serivisy mozika mivantana nandefa tsena ary nalaza tamin'ny fomba fanjifana vaovao ...
Ahoana ny fomba hanamboarana ireo fihetsika Android 10 amin'ny finday rehetra
Raha mbola tsy nampiasa ny fihetsika vaovao an'ny Android 10 ianao, ity app ity dia ho tonga aminao avy amin'ny tahotra ka afaka hitondra ny traikefa teo aloha.
Manomboka amin'ny mpampiasa sasany ny maody maizin'ny Facebook
Mety ho zava-misy tsy ho ela ny maody maizina ao amin'ny Facebook, satria maro ny mpampiasa no nahita azy io tamin'ny fampiharana azy ireo vonjimaika
Efa misy izao ny divay 5.0: ny fampiharana hampandeha programa Windows amin'ny findainao Android
Rindrambaiko mamela antsika rendrarendra ary afaka mihazakazaka fampiharana Windows amin'ny Android tsy misy olana. Solony amin'ny ROOT.
[APK] WhatsApp dia mandray ny maody maizina amin'ny beta farany asehonay anao ny fomba fametrahana azy amin'ny horonan-tsary
Ny maody maizina dia efa misy ao amin'ny WhatsApp, na dia tsy amin'ny fomba ofisialy aza fa amin'ny beta, na dia lazainay aminao aza ny fomba fampidinana sy fametrahana azy.
Google nandefa fampiharana 3 hanampiana anao amin'ny fiankinan-doha amin'ny telefaona
Ny fiankinan-doha amin'ny finday ankehitriny dia teboka hita taratra eo amin'ny fiarahamonina. Google dia mandefa rindranasa telo hahafantarana ny fampiasana isan'andro.
Raha mitady ny mpilalao mozika tonga lafatra ianao mba haka sary an-tsaina tsara ny tononkiran'ny hira dia Musicolet ity
Mpilalao mozika afaka maka sary an-tsaina tsara ireo tononkira tafiditra ao amin'ny Mp3 rehetra anananao ao amin'ny tranombokinao.
Chrome for Android dia hampahatsiahy antsika fa manana takelaka maro misokatra isika
Google dia te hampahatsiahy antsika amin'ny alàlan'ny Chrome fa tokony hanidy tabilao tsindraindray isika
TomTom dia nanao fifanarahana tamin'i Huawei hanoloana ny Google Maps
Ny fampiharana ny sarintanin'ny terminal Huawei dia ho TomTom aorian'ny fifanarahana nambaran'ny orinasa Holandey
WhatsApp no ​​lasa fampiharana faharoa tsy Google nahatratra 5.000 tapitrisa alaina
Ny sehatra fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, WhatsApp, dia nihoatra ny 5.000 tapitrisa ny fampidinana tao amin'ny Play Store
Ny fampiasana ny S Pen dia mety hidika fahombiazana tsara kokoa amin'ny Galaxy Note 10 sy maro hafa raha toa ka ataonao amin'ireo fampiharana 3 tena manokana sy maimaimpoana ireo.
Miverina any Eropa ny lohahevitra MIUI rehefa afaka roa taona
Miverina ny lohahevitra MIUI rehefa afaka roa taona tsy niasana tany Eropa. Nanambara ny orinasa fa misy ho an'ny mpampiasa sasany.
Nandao ny drafitra fampidirany doka amin'ny WhatsApp ny Facebook
Najanona ny fandaminana ny fampidirana doka amin'ny WhatsApp, fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra eran-tany ny Facebook.
TickTick dia fampiharana ho an'ny lisitry ny zavatra tokony hataonao izay tsy tokony halainao
TickTick dia rindrambaiko iray manontolo hamoronana lisitry ny zavatra tokony hatao ary hifehezana ireo nofenoinao. Maimaimpoana izy io, na dia misy safidy premium aza.
Github dia mandefa ny fampiharana ho preview amin'ny Android
Github dia efa tonga ho fampiharana ho an'ny findainao Android ary miresaka momba ny serivisy fampiantranoana lehibe indrindra izahay ...
Izy io dia mitondra ny kinova 6.0 an'ny Microsoft Launcher: io no ho tranon'ny Surface Duo
Modely amin'ny alina sy fomba fizahantany ho an'ny pejin'ny Microsoft Launcher ao amin'ny Google Play ary ilay kinova 6.0 miaraka amin'ny vaovao misimisy.
Google dia miasa amin'ny rindranasa fandraketana antso an-tariby ho an'ny fampiharana an-taroby
Tsy mbola misy io, fa ho fotoana kely fotsiny alohan'ny apetraky ny fampiharana Google Phone ny firaketana ny antso ataon'ny antoko fahatelo.
Hitsahatra tsy hampandrenesina ny Play Store rehefa manavao fampiharana ianao
Nanafoana ny fampandrenesana rehetra i Google fa mandraka ankehitriny ny Play Store dia naneho rehefa nanavao na nanavao ireo lamina ho azy izahay.
Ahoana ny fametrahana OctoStream amin'ny fahitalavitra Smart
Asehonay anao ny dingana tokony harahina hametrahana OctoStream amin'ny Smart TV. Fampiharana iray ahafahanao mijery karazana andian-tsarimihetsika, horonan-tsary ary fanadihadiana rehetra.
Ny Android Auto dia nihoatra ny 100 tapitrisa alaina ao amin'ny Play Store
Android Auto dia iray amin'ireo fampiharana fitetezana zavatra maro be azo zahana. Ity iray ity dia efa navotsotra in-100 tapitrisa mahery tao amin'ny Play Store.
Ny mailaka avy amin'i Edison dia mpanjifa mailaka kanto, azo antoka ary haingana
Haingam-pandeha sy azo antoka ary feno tanteraka amin'ny safidy ity mpanjifa mailaka antsoina hoe Email avy amin'i Edison ho an'ny findainao Android.
Io dia ahafahanao mibodo ny mikrô ihany koa ka tsy ampiasain'ny rindranasa hafa. Ny Past Recorder dia fampiharana mahaliana hanoratra ny lasa.
Ahoana ny fomba hampandehanana ny maody maizin'ny tena ao amin'ny Chrome
Lahatsoratra-video izay anehoako anao ny fomba ahafahanao mamela ny maody maizina tena izy ao amin'ny Chrome tsikelikely. Fomba maizina iray izay misy fiatraikany amin'ny interface sy tranonkala rehetra notsidihina.
Soraty haingana kokoa amin'ny Kitendry Typcha "Hexagon" vaovao
Kitendry tsy miankina sy ivelan'ny daholobe misy safidy maro ho anao hanandramana hitazona ilay endrika hexagonal an'ny Typught Keyboard.
Ny rindrambaiko SmartThings an'ny Samsung dia manana mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa
Ny rindranasan'i Samsung amin'ny fitantanana ireo fitaovana mifandray amin'izao fotoana izao dia manana mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa
Chrome dia hanampy anao hampihena ny fampandrenesana pejy web
Hanome safidy bebe kokoa amin'ny mpampiasa hitantanana fampandrenesana pejy web i Chrome, noho ny fampidirana fampandrenesana mangina.
Ny 100 andro an'ny SOTKA ho anao hanova ny fahazaran-tsakafo ary hanana endrika ara-batana tsara
Tanjona vaovao amin'ity taona 2020 ity ary afaka tratranao miaraka amin'ny SOTKA, fampiharana vaovao hametraka anao amin'ny programa fanampiana sy torohevitra mandritra ny 100 andro.
Azontsika atao izao ny manoratra amin'ny sary Google Photos
Google Photos dia nanisy fiasa vaovao ahafahantsika manoratra na manoratra lahatsoratra amin'ny sary voatahiry ao amin'ny Google Photos
Ny sasany amin'ireo smartphone Huawei dia manolo-kevitra ny hamafa ny fampiharana fandefasan-kafatra Allo amin'i Google
Ilay rindranasan-kafatra fandefasana hafatra Allo avy amin'i Google, dia voamarika fa voan'ny otrikaretina Huawei sasany